Mogadishu Journal » 2016 » September » 25
Elections in Somalia to choose a new parliament have been postponed for the second time in two months due to a dispute over how to select future members, a lawmaker said on Sunday. Voting for the 275-seat parliament was scheduled to start this weekend and end on Oct. 10, with new...
Xildhibaannadii ugu horeeyay ee beellahooda cod ka hellay
Mjournal :–Kulan lagu taageerayay in mar kale xubnaha baarlamaanka ay ka mid noqdaan seddex kamid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulankaasi ayaa waxaa kasoo qeyb galay odayaal, waxgarad iyo siyaasiyiin waxaana lagu sheegay in...
Xukuumada Soomaaliya oo ka hadashay xukun dil ah oo dowladda Hindiya ku riday 50 dhalinyarro Soomaali ah
Mjournal :–Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhalinyaradii Soomaalida ahaa ee shalay Maxkamad ku taal dalka India ku xukuntay dil ay ahaayeen Kalluumeysato, iyadoo ku baaqday inay helaan daryeel bani’adanimo iyo garsoor xaq ah. Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda...
Wasiirka arrimaha dibada Soomaaliya oo khudbad ka jeediyay shirka gollaha guud ee QM
Mjournal :–Wasiirka arimaha dibada Somalia, C/salaan Hadliye Cumar, ayaa khudbad uu kaga hadlayo Xaaladda Somalia ka jeediyay Shirka Guud ee QM ee ka socda Xarunta QM ee New York. C/salaan Hadliye, ayaa ka hadlay Arrimo badan oo ay ku jirto Xaaladda Somalia, wuxuuna xusay...
Guddiga doorashada oo laga sugayo xili waqtiyeedka kala ee doorashada
Mjournal :–Guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee ka dhici doonta dalka Dhamdaaka Sanadkan 2016, ayaa lagu wadaa inay mar kale maanta ka hadlaan xilliga doorashada oo u badan tahay inuu dib u dhac ku yimid. Xubnaha guddiga doorashooyinka ayaa lagu wadaa inay ku...
Dagaal culus oo ka dhacay gobolka Baay
Mjournal :–Dagaal u dhaxeeyay ciidanka Maamulka Koofur Galbeed iyo Al-Shabaab ayaa ka dhacay deegaanka Iidaale ee Gobolka Baay, kaddib markii ciidamada booliska gaarka ah ay weerar ku qaadeen fariisin Al-Shabaab ku lahaayeen deegaankaas. Sida ay sheegayaan wararka...
Khad tareen oo isku xiri doona Itoobiya iyo Jabuuti oo la daah furayo bisha soo socta
Mjournal :–Khadka casriga ah ee dhawaan la dhisay ee tareenada ee isku xiraya dalalka Itoobiya iyo Jabuuti ayaa waxaa lagu wadaa in la furo bisha soo socota. Khadkaa ayaa waxaa lagu wadaa inuu isku xiro caasimadaha Addis Ababa iyo Jabuuti dalka Jabuuti. Mudadaa markii la...
Akhriso magacyada guddiga xallinta khilaafaadka oo uu magacaabay ra’iisal wasaare Sharma’arke
Mjournal :–Ra’isul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke ayaa magacaabay guddiga xallinta khilaafaadka ee doorashada 2016. Guddigan ayaa ka kooban 25-Xubnood , waxaana loogu tala galay in ay xaliyaan khilaafaadka ka dhasha...
Mjournal :–Ciidanka dowladda Suuriya iyo xooggaga mucaaradka ah ayaa ku dagaallamaya deegaan ku yaalla waqooyiga magaalada Xaleb. Gacan ku haynta degmada Handarat ayaa waxa loolan adag ugu jira dhinacyada ku dagaallamaya Xaleb. Ciidanka Bashar al-Assad ayaa doonaya in ay...
Kooxda Arsenal ayaa garoonkeeda Emirates ku dubatay kooxda ay aadka u xafiiltamaan ee Chelsea, kaddib markii ay ku garaacday 3-0, iyadoo goolashaas ay dhasheen qeybtii hore ee ciyaarta. Arsenal oo lixdii kulan ee u dambeysay aanay wax gool ah ka dhalin Chelsea ayaa caawa mar...